NYAYA YEDU | Zhejiang Liper Chiedza Technology Co., Ltd.
CHIEDZA - Kupenya, Kuvimbisa
Iwe haugone kufungidzira zvichaitika kana pasina chiedza munyika
Vanhu vachiri kutsvangadzira murima
Kuda uye kutsvaga kwechiedza kunogona kuteverwa kumashure kungano dzechiGiriki - iwo murazvo wePrometheus
Musi wa21 Gumiguru 1879
Edison akashandura ngano kuva chokwadi, akaunza chiedza chaicho
Oyakapa nguva nyowani yenhoroondo yesainzi uye nevanhu vese
Panguva imwecheteyo, pano panouya nyaya yaLiper
Kutsvaga yakasimba uye yepamusoro mhando yekugadzira, iyo Kambani inonamira kukoshesa kukuru kune mukurumbira uye mhando. Zvese zvigadzirwa zvikuru zvakapfuura IEC, CB, CE, GS, EMC, TUV, EMC, LVD uye ERP zvitupa zvepasi rose uye CQC uye CCC China zvitupa zverudzi. Zvese zvigadzirwa zvinoitwa zvinoenderana ne ISO9001: 2000 International Quality System Iyo Kambani yakagadzika yenyika-chikamu R & D tekinoroji nzvimbo uye murabhoritari. Iyo ine yakasarudzika R & D timu uye yawana akasiyana patents, kusanganisira gumi nemaviri patents yekugadzira, 100 patents yekushandisa, uye 200 patents ekugadzira. Kubva mukugadzirwa, R & D kune hunyanzvi, hwave mutungamiriri wemwenje indasitiri uye yakatengeswa pasi rese, zvigadzirwa zvaro zvinonakidzwa nemukurumbira pakati pevatengi. Mutungamiri wekambani, akaperekedza Mutungamiriri weChina kushanyira nyika dzeEurope kwenguva dzakawanda uye vakaita nhaurirano dzebhizinesi kuti vakurukure kuvandudzwa kwemaindasitiri.
Seye inotungamira kambani yekuvhenekesa ine mukurumbira brand, isu tiri mumwe weakakosha mutambi anotungamira iko kweChina yekuvhenekesa indasitiri .Kubva pane zvese zviri pamusoro, isu takawana kiyi brand dumba pane canton yakanaka uye yakagara kweanopfuura makore gumi.
Muna 2015, Pano panouya mukana.
Nokusvikira zviri pamutemo kubatana kwakabatana muna Zvita 2015 pakusaina chibvumirano chekudyidzana pakati pevatungamiriri vepamusoro vekambani yeGerman nevamiriri biyake weChinese kuGerman, Germany Liper Electric Co, Ltd nesu vakaita kuitisa pamwe chete, zvichiratidza nhanho nyowani yekukura kwaLiper. Anotakura nendege mumaindasitiri emwenje epasi rose anotanga kufamba nechikepe ......
Tichanyatsobatanidza zveGerman zvepamusoro maindasitiri matekinoroji uye nekuvandudza mweya yeGerman kuti ibudirire mukuita uye kusimudzira kusimudzira, kuitira kuti ipe nyika yekutanga-kirasi yakasanganiswa magetsi ekugadzirisa emwenje wepasi rese wekuvhenekesa, mwenje wemwenje uye mwenje wekunze. Haisi chete yekuwedzera kweakarongeka marongero emativi maviri, asi iyo nyowani yekudyidzana pateni uye zano rinounza zvinosvika kure kukanganisa kune LED mwenje indasitiri.
Isu tanga tagadzira zvisingaverengeke kubwinya, asi nyowani, zvirinani, uye zvakanakisa ndizvo zvatisingamire chinangwa.
Liper yakazvipira kusimudzira yakasvibirira, inoenderana uye yakaderera-kabhoni mararamiro, kugadzira yepamusoro-soro yekuvhenekesa nyika yepasirese, uye kuvhenekera zuva rega rega kune vese!
Liper mwenje inosasa pamusoro penyika yero uye inoita kuti vanhu vakoshese kristaro yesainzi tekinoroji nehunyanzvi.
Liper inoita kuti nyika iwedzere simba kuponesa !!!